Chrissy Teigen နဲ့ Backstreet Boys အဖွဲ့တို့ရဲ့ Twitter ပေါ်က အမေးနဲ့ အဖြေ
On June 11, 2018 June 11, 2018 By Aminnyar
အမေရိကားက စူပါမော်ဒယ်လ်တစ်ဦးဖြစ်သူ Chrissy Teigen ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာတစ်နေ့တုန်းက သူမရဲ့ Twitter ပေါ်မှာ သီချင်းတစ်ပုဒ်ထဲက စာသား တစ်ပိုင်းတစ်စကို တင်ခဲ့ပါတယ်။
သူမတင်ခဲ့တဲ့ သီချင်းစာသားတချို့ကတော့ တခြားမဟုတ်ပါဘူး။ Backstreet Boys အဖွဲ့ရဲ့ ‘I Want It That Way’ ဆိုတဲ့ နာမည်ကျော် သီချင်းထဲကပါ။
Chrissy က… I never wanna hear you say… ‘ I want it that way’ cause ‘ I want it that way’…
ဆိုတဲ့ သီချင်းစာသားလေးကို အရင်တင်ပြီးမှ အဲဒီစာသားထဲက it ကိုရည်ညွှန်းပြီး…
သူက အဲဒါကို မကြားချင်တော့တာ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူက အဲဒီနည်းလမ်းတစ်ခုတည်းကိုပဲ လိုချင်တော့တာမို့လို့ဆိုပဲ။ သူက အဲဒါကိုပဲ ပြောချင်နေတာလား…? ဒါဆို အဲဒီ ‘အဲဒါ’ ဆိုတာကရော ဘာလားပဲ…. ?
ဆိုတဲ့ မေးခွန်းလေးတချို့ကို အရွှန်းဖောက်ဟန်နဲ့ မေးထားခဲ့ပါတယ်။ (ပြောရမယ်ဆိုရင် နှစ်လုံးတည်းနဲ့ ဘောင်းဘီကျပ်နေတယ် ဆိုတာမျိုးရယ်။ :D)
အနုပညာရပ်ဝန်းက လူတွေအချင်းချင်း ရယ်စရာအဖြစ် မေးတာဖြစ်ပုံရပေမယ့် Backstreet Boys အဖွဲ့က ဒီအတိုင်း အလေးမထားသလိုတွေ လုပ်မနေခဲ့ပါဘူး။ Twitter ပေါ်က Chrissy ရဲ့ အမေးကို ခုလိုပဲ တလေးတစားနဲ့…
ငါတို့ရဲ့ ကမ္ဘာနှစ်ခုကို ခွဲခြားဖို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အမှားတွေနဲ့ နာကျင်ခံစားစရာတွေကို မင်းလိုချင်နေတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ မင်းပြောလာမယ့် အဲဒီအကြောင်းအရာတွေကို ငါတို့ မကြားချင်ပါဘူး။ ငါတို့မလိုချင်တဲ့ အဲဒီအကြောင်းအရာတွေကို မင်းမလိုချင်တာကပဲ ငါတို့လိုချင်တဲ့ လမ်းကြောင်းတစ်ခုပါကွယ်….
ဆိုပြီး သူတို့ရည်ညွှန်းချင်ခဲ့တဲ့ it ဆိုတဲ့ စကားလုံးရဲ့ ဆိုလိုချင်တာကို ပြန်ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးဘဲ ၁၉၉၉ ခုနှစ်လောက်မှာ အရမ်းနာမည်ကြီးခဲ့ပြီး ဂရမ်မီဆုအတွက်ပါ တစ်ကြိုခန့်မှန်းပေးခြင်း ခံခဲ့ရဖူးတဲ့ အဲဒီသီချင်းလေးရဲ့ gif ဖိုင်လေးကိုပါ တင်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။
အဲဒီအဖြစ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး Backstreet Boys အဖွဲ့ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့က မီဒီယာတချို့နဲ့ တွေ့တဲ့အခိုက်မှာ ထပ်ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။
Chrissy ဟာ ကျွန်တော်တို့ကို အားပေးနေတဲ့ Big fan တစ်ယောက်ဆိုတာ ထင်ရှားပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ကျွန်တော်တို့ဟာ သူ့ကို ချစ်ခင်စွာနဲ့ ကျေးဇူးလည်း သိပ်တင်ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားတို့ သိသလား။ တစ်ခါတလေကျရင် သီချင်းတွေထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ ရည်ညွှန်းချင်တာက တစ်ခုတည်းပါ။ တခြားအရာတွေ အားလုံးကို လိုက်မရည်ညွှန်းပါဘူး
AJ McLean, Kevin Richardson, Nick Carter, Brian Littrell နဲ့ Howie Dorough တို့ ငါးယောက်ပါ၀င်တဲ့ Backstreet Boys အဖွဲ့ဟာ အမေရိကားနိုင်ငံက Orlando, Florida မှာ ၁၉၉၃ ခုနှစ်ကတည်းလောက်က စတင် သန္ဓေတည်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့အဖွဲ့ရဲ့ ပထမဦးဆုံး Album ဖြစ်တဲ့ Backstreet Boys နာမည်နဲ့ အခွေကိုတော့ ၁၉၉၆ ခုနှစ်ကျမှ စတင်ထုတ်ဖြစ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ သူတို့တွေဟာ MTV Music Award ဆု၊ Billboard Music Award ဆု စတာတွေအပြင် တခြားဆုတွေပါ ရရှိခဲ့တဲ့အထိ အောင်မြင်တဲ့ သီချင်းခွေတွေ၊ သီချင်းတွေကို ဆက်လက်ဖန်တီးပြီး တောက်လျှောက်ထုတ်ဝေခဲ့ကြတာပါ။
ဒီနေရာမှာ စကားစပ်လို့ပြောရရင် သူတို့နဲ့ခေတ်ပြိုင်လို့ ပြောရင်ရနိုင်တဲ့ Westlife, N’Sync စတဲ့ ယောကျာ်းလေး အဆိုအဖွဲ့တွေနဲ့ တခြားအဖွဲ့တွေရယ်၊ သူတို့ထက် နည်းနည်းနောက်ကျပြီးမှ ပေါ်လာတဲ့ Blue တို့လို ယောကျာ်းလေး အဆိုအဖွဲ့တချို့တို့ရယ်ဟာ အစပိုင်းမှာ အကြီးအကျယ် အောင်မြင်ခဲ့ကြပြီးမှ နောက်ပိုင်းမှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ပြိုကွဲသွားခဲ့ကြတာမျိုးတွေပါ။ ဒါပေမဲ့ Backstreet Boys အဖွဲ့ကတော့ အရင်ကတည်းကနေ အခုထိ လက်တွဲညီနေဆဲဖြစ်တဲ့ ရှားရှားပါးပါး အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လို့လည်း ပြောမယ်ဆိုရင် ရနိုင်လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။
ဂီတသက်တမ်း ၂၅ နှစ်လောက်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ သူတို့အဖွဲ့ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ မေလထဲမှာ သူတို့ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက် သီချင်းသစ်ဖြစ်တဲ့ ‘Don’t Go Breaking My Heart’ ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို ထုတ်လွှင့်ခဲ့တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ ။
PREVIOUS POST Previous post: Janet Jackson ဟာ ညပိုင်းကြီးမှာ ဘာကြောင့်များ ရဲဌာနကို ဖုန်းဆက်ခဲ့ရတာပါလဲ….?
NEXT POST Next post: ပန်းပင်တွေစိုက်ပြီး သာယာကြည်နူးပျော်ရွှင်နေကြတဲ့ Gigi နဲ့ Zayn